I-Android 7.0 Nougat ifinyelela yonke iHuawei P9 | Izindaba zamagajethi
I-Android 7.0 Nougat iza kuwo wonke ama-Huawei P9
Baningi abakhiqizi ukuthi kule nyanga efanayo kaJanuwari kubonakala sengathi bayisebenzisile futhi sebeqala ukubuyekeza ama-flagship abo enguqulweni yakamuva ye-Android, a I-Android 7.0 Nougat ukuthi, yize wayebukeka emelana nokufika, iqiniso ukuthi usevele unathi. Enye yezindaba ezithakazelisa kakhulu namuhla, ikakhulukazi uma une- Huawei P9, ukuthi inkampani isanda kumemezela ukuthi isivele inesibuyekezo esikhona kunoma ngubani ofuna ukusilanda futhi asifake ku-terminal yabo.
Njengokujwayelekile, indlela ekhethwe ukusatshalaliswa kwesibuyekezo eSpain ihamba nge Ota futhi, okungenani ekuqaleni, kunjalo kuhloswe kubo bonke abanikazi be-Huawei P9 abanenguqulo yamahhala. Njengemininingwane, ngaphambi kokuqhubeka, ngikutshele ukuthi i-P9 ingeyokuqala kuwo wonke amatheminali enkampani angagcina evuselelwe kule nguqulo, ezofinyelela kuwo wonke umuntu ngemuva kwamasonto ambalwa.
Manje usungabuyekeza i-Huawei P9 yakho iye ku-Android 7.0 Nougat namuhla.
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esitholakala ngenhla kwale migqa, uma une-terminal yamahhala futhi ufuna ukuthola isibuyekezo, ungakwenza ngqo ngokusicela kuhlelo lokusebenza Sawubona. Ukuphela kwesidingo sokuthi wenze lesi sicelo ukuthi isicelo kumele sibuyekezwe, okungenani, kufayela le- Inguqulo ye-2.0.2. Uma sekuvuselelwe, uma ngabe bekufanele ukwenze, kufanele nje uyifinyelele, chofoza kuthebhu ''Isevisi', ngena ngemvume'Ukuvuselelwa kwe-ROM'bese uchofoza inketho ethi'Faka isicelo se-'.
Ngokulandela lezi zinyathelo ezilula, isibuyekezo sizofika esigungwini sakho futhi sizofakwa ngaphandle kokuthi wenze noma yikuphi ukuguqulwa noma isenzo esingeziwe. Ukusuka kulo mzuzu uzokwazi ukujabulela zonke izici ezintsha eza ne-Android 7.0 Nougat kanye nenguqulo yakamuva ye Isixhumi esibonakalayo se-EMUI 5.0 Huawei.
Ukwaziswa okwengeziwe: Huawei
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-Android 7.0 Nougat iza kuwo wonke ama-Huawei P9
Lezi yizo zonke izindaba kusibuyekezo sakamuva se-Snapchat
Yazi uNeon kancane, isiphequluli sokuhlola esisha sika-Opera